Ego ole ka ị maara maka ịkwakọ akara?-CIXI DONGFENG SEALING&PACKING Co., Ltd.
Teepu akara akara PTFE
Azụ gas gbara gburugburu
Gbasaa PTFE Joint Sealant
Kedu ihe ị maara maka ịkwakọ akara?
Oge: 2021-12-08 Hits: 7
Kedu ka esi ahọrọ usoro akara mgbe ị na-emepụta igwe? Isiokwu a na-ewe gị ka ị ghọta ihe nkịtị ike ike akara ụdị na n'ibu imewe. Ha bụ mbukota akara, igwe akara, akọrọ gas akara, labyrinth akara,
akara mmanụ, akara ike na gburugburu gburugburu. Taa, ka anyị buru ụzọ buru ụzọ tụlee akara nkwakọ ngwaahịa ọnụ!
Enwere ike kewaa akara nkwakọ ngwaahịa dị nro, mkpuchi mkpuchi siri ike, na mkpuchi mkpuchi akpụ akpụ dịka njirimara nhazi ha siri dị.
1) Soft mbukota akara
Soft mbukota ụdị: mbukota
A na-akpachikarị mbukota site na eriri ndị dị nro, bụ nke na-ejupụta n'ime oghere a kpuchiri ekpuchi site n'iberibe nwere akụkụ akụkụ akụkụ akụkụ anọ. A na-emepụta ike ịpị site na gland iji mpikota onu ma mee ka nkwakọ ngwaahịa ahụ bụrụ
pịa n'elu akara akara (ogwe). N'elu elu elu na oghere nke mechiri emechi), a na-emepụta ike radial maka mmetụta mkpuchi ahụ, si otú a na-arụ ọrụ akara.
Oge ọdabara maka mbukota dị nro:
Ihe nkwakọ ngwaahịa ahọpụtara maka ịkwakọ ngwaahịa na-ekpebi mmetụta akara nke nkwakọ ngwaahịa. N'ikwu okwu n'ozuzu, ihe nkwakọba ihe na-ejedebe site na okpomọkụ, nrụgide na pH nke usoro ọrụ na-arụ ọrụ, na ịdị nro na elu.
eccentricity nke igwe akụrụngwa nke nkwakọ ngwaahịa na-arụ ọrụ na ọsọ ahịrị, wdg, ga-enwekwa ihe achọrọ maka nhọrọ nke nkwakọ ngwaahịa.
Mpempe akwụkwọ graphite nwere ike iguzogide oke okpomọkụ na nrụgide dị elu, ma bụrụ otu n'ime ngwaahịa kachasị mma iji dozie nsogbu nke okpomọkụ dị elu na nkwụsị nrụgide dị elu. Nguzogide corrosion, akara nke ọma na-arụ ọrụ
-ance, ọrụ kwụsiri ike na ntụkwasị obi.
Mkpokọta Aramid bụ ụdị eriri organic siri ike. A na-etinye polytetrafluoroethylene emulsion na mmanu mmanu akpa akpa akpa.
Polytetrafluoroethylene nkwakọ bụ nke dị ọcha polytetrafluoroethylene dispersion resin dị ka akụrụngwa, nke mbụ e mere na raw film, na mgbe ahụ gbagọrọ agbagọ, braided na kpara n'ime mbukota. Enwere ike iji ya mee ihe n'ọtụtụ ebe na nri, ọgwụ ọgwụ,
akwụkwọ, eriri kemịkalụ, wdg chọrọ ịdị ọcha chọrọ, na valvụ na nfuli nwere mgbasa ozi na-emebi emebi siri ike.
2. Akara mkpuchi siri ike
E nwere ụdị mkpọ mkpuchi siri ike abụọ: mgbanaka gbawara agbawa na mgbanaka gbawara agbawa.
Nke mbụ: Ihe ndị a na-ahụkarị na oke nke ngwa O-mgbanaka
Ọzọ: Gịnị bụ ụzọ ntapu nke mgbanaka akara? Kedu ihe kpatara enwere mgbapu?
Copyright © CIXI DONGFENG SEALING & PACKING Co., Ltd Ikike niile echekwabara.